तपाईंलाई सधैँ पैसाको अभा’व हुन्छ ? लक्ष्मीलाई चढा’उनुहोस् यी चीजहरू : – Sadhaiko Khabar
तपाईंलाई सधैँ पैसाको अभा’व हुन्छ ? लक्ष्मीलाई चढा’उनुहोस् यी चीजहरू :
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, आषाढ ०४, २०७८ समय: ६:४९:०१
हिन्दु धर्म अनुसार लक्ष्मीलाई धनकी देवी भनेर पुज्ने गरिन्छ । लक्ष्मीलाई सुन्दरताको साथै सफल सौभाग्य,समृद्धि र सम्पन्नताको स्रोतको रुपमा पनि मानिन्छ । लक्ष्मीलाई खुसी पार्न सके धनी भइन्छ भन्ने हिन्दु धर्मावलम्बीहरुको विश्वास रहेको छ ।
८) लक्ष्मीलाई एकदम सफासुग्घर ठाउँ मात्र मनपर्ने हुनाले तपाईंको घर, आँगन, भान्साकोठा, पूजाकोठा, सुत्ने ओछ्यान सधैँ सफासुग्घर र च’ट्ट मिलेको हुनुपर्दछ । फोहोर र सामान य’त्रतत्र छरिएको ठाउँमा लक्ष्मीले बास नगर्ने जनविश्वास रहेको छ ।
९) आफ्नो सोच र व्यवहारलाई सधैँ सकारात्मक बनाएर काममा निरन्तर अघि बढ्नुपर्छ । किनभने कर्म नगरी धन प्राप्ति हुँदैन र त्यसका साथै नका’रात्मक सोचले काम गरेमा कालान्तरमा उ’ल्टै हा’नीनोक्सानी पुर्याउने गर्दछ ।